Ogwe aka na -egbochi ihe nrụpụta - China Hand Lever Block Manufacturers, Suppliers
Eriri eriri lever hoist
Okwu mmeghe: Ihe mkpuchi nke Wire Rope Lever Block bụ nke alloy aluminom siri ike, eriri igwe na -akwado nwere nnukwu mbibi dị elu na nguzogide abrasion, dị ka ndị ahịa si chọọ ịhazi ogologo kwesịrị ekwesị nke eriri igwe nchara. Ike kachasị bụ kilogram 800, kilogram 1600, 3200 n'arọ. Kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ogbunigwe, ebe a na -ewu ihe, ụgbọ mmiri, ụgbọ njem na oge ndị ọzọ, ọ bụ ezigbo ngwa maka nrụnye akụrụngwa, mbuli ibu ...
Mgbanwe nke ọnụahịa HSH
Njirimara nke ihe na-awụlikwa elu anyị 1. Ihe niile na-anabata nchara nchara siri ike, ebe ọgwụgwọ ịgba na-adịte aka, mgbochi nchara na mmetụta nkwụsị. 2. yinye alloy ọkwa G80, dị ọcha ma dịkwa nchebe. A na -akpụzi agbụ agbụ n'ụzọ ziri ezi ma na -adịgide. 3. Ihe niile maka ntụgharị gia, njikọ dị n'etiti gia na ogwe osisi niile nwere uwe ma ọ bụ ogwe aka. 4. nko: ọkachamara okpomọkụ ọgwụgwọ esorowo nko nwere ike bugharia 360 ogo, nke nwere àgwà nke ngwa ekwe ekwe. 5. Nnukwu akụ iji dozie shei ma ghara sav ...
Ihe mgbochi HSH-VT lever
HSH usoro lever hoist HSH usoro lever hoist bụ ụdị mkpanaka na-ebugharị ma na-arụ ọrụ ngwa ngwa na-adọkpụ, nke nwere ike itinye ya n'ọrụ ọkụ eletrik, ogbunigwe, ụlọ ụgbọ mmiri, saịtị ihe owuwu, ụgbọ njem na nkwukọrịta maka ịwụnye akụrụngwa, ibuli ngwongwo. , na-adọkpụpụta akụkụ igwe, ịkpa oke na idobe ya, na-emechi wires, mgbakọta na ịgbado ọkụ wdg.
Ntuziaka Lever Chain ndoli, Micro Electric eriri eriri, Bannon Electric Hoist, Igwe ọkụ eletrik eletrik, Lever Puller, Jet 1.5 Ton Chain ndoli,